Itti gaafatamtoonni Nebraska naamunan dhan kan dhiyaatef irrati hundaa,un qorannoo corona virus irra | KWIT
Doctors Iowa akka jedhetti ijoolle umriin isaa xiqqaa tae urrati ufiin uf ajeessun baaye baayacha demu jira, Covid-19 sababa isa jalqabaati. Ijoollen baayinnaan addumaan itti dhagahama nama isaan qarqaarus nidhabu. January dhuma irrati, maneen haakima kan marzii toohattan akka himanitti ijoolen durba umriin isaani 11 hanga 14 jirran uf ajjeesuudhaf yookin uf miidhudhaaf yaali baaye godhanii jiru.
Lakkoofsi nama covid-1 9 qabaman Woodbury County keessati gad xiqqaata deemu jira. Siouxland District health guyaa wiyxata nama 6 qabame dabalaniii jirani. Qoranno bulti 14 keessati guyyaa jimaata parsantii 1% tokkoon gad buee jira amma parsantii 5% jira. Hospitaala Sioux City lama keessati dhukubsattoota corona virus 15 ttuu yaalamu jira. Lakkoofsis guyyaa darbee walin kal walfakkaatuudha, lakkoofsi nama du’es waliigalatti 210 dha.
National Weather Service akka jedhanitti guyaa kaleesa Sioux city keessati snow inche 6 bu’ee akka ture himan.
Meteorologist akka gabaasaniiti naannawa Siouxland fi jidduuti sababa duummessa baayeten snow hin eegamin baaye argatani akka turan.